Huawei oo iibisay hal milyan oo taleefanka "mate 30" 3 saacadood gudahood – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Huawei oo iibisay hal milyan oo taleefanka “mate 30” 3 saacadood gudahood
Huawei oo iibisay hal milyan oo taleefanka “mate 30” 3 saacadood gudahood
Mamnuucida dawladda Mareykanka ee Huawei iyo isku dayeysa inay ka hortagto la macaamilida Google ayaa taleefanka calanka cusub ee shirkadda taleefanka Shiinaha “Mate 30” ku dhex dhigtay astaamo qarsoon.
Laakiin shirkadda weyn ee Shiineeska ah ee ka socota Munich, Jarmalka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday bilaabista taxanaha taleefanka casriga ah, qiimahaasna waxaa looga dhawaaqay Yurub.
Si kastaba ha noqotee, ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan goorta ay taleefannadu sii iibin doonaan, oo ay u badan tahay, maxaa yeelay Huawei wuxuu doonayaa inuu xalliyo dhibaatada Google ka hor inta aan la bilaabin taleefannada taxanaha ah “mate 30” ee caalamiga ah.
Shiinaha, si kastaba ha ahaatee, waa ganacsiga caadiga ah ee Huawei, halkaas oo Mate 30 iyo Mate 30 Pro la iibiyay Khamiisti hore.
Sida laga soo xigtay Huawei, hal milyan oo mid ayaa la iibiyay 3 saacadood gudahood.
In kasta oo lambarrada ay Huawei ku dhawaaqday aan lagu xaqiijin karin inay tahay shirkad gaar loo leeyahay, haddana sawirada dadka badan ee dukaanka calanka cusub ee Shenzhen ayaa muujinaya safaf dhaadheer iyo buux-dhaaf u badan kuwa doonaya inay iibsadaan aaladda.
Intaas waxaa sii dheer, alaabada Taobao, oo ah goobta wax laga iibsado ee internetka ee Shiinaha, ayaa waqtigeedii dhammaaday, waxaana moodaalooyin laga keenay “mate 30” ah lagu iibinayo Hong Kong, oo ah 1500 oo dollar oo Hong Kong ah, taasoo muujineysa in dalabka sayid uu yahay mid ka sarreeya iibka.
Iibinta hal milyan oo unug wax kayar hal toddobaad waa mid aad u xiiso badan, laakiin laga yaabee inaysan la yaab ku ahayn Huawei caan ku ah waddankiisa hooyo, kaasoo kordhay kaliya ka dib riwaayaddii Mareykanka ee dhowaan, qeyb ka ahayd dagaalkii ganacsiga Sino-US. Huawei waxaa ula dhaqma si aan caddaalad ahayn maamulka Mareykanka, sidaa darteedna waxay rabaan inay muujiyaan taageeradooda iyagoo muujinaya dareen qaran.
Sida laga soo xigtay shirkadda cilmi-baarista ee Canales, Huawei waxay Shiinaha u soo dirtay 37.3 milyan oo taleefanka saddexdii bilood ee labaad ee sannadkan, oo ah 31 boqolkiiba laga bilaabo sannadka 2018.
Xaqiiqdii, Huawei wuxuu ahaa astaanta kaliya ee kordhisay iibka sanadkan marka la barbar dhigo sanadkii hore Shiinaha, marka la barbar dhigo iibka Apple, Xiaomi, Oppo iyo Vivo sanadkan marka la barbar dhigo tirooyinka 2018.
Previous articleKadib weerarkii Aramco, Pentagon wuxuu isku dayayaa hub cusub oo looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Next articleHuawei sold a million phone “mate 30” in 3 hours